Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite oo qarka u saaran inuu iscaliso kaddib markii xiddigaha xulku ay diideen inay ciyaaraan Copa America – Gool FM
Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite oo qarka u saaran inuu iscaliso kaddib markii xiddigaha xulku ay diideen inay ciyaaraan Copa America
Haaruun June 5, 2021
(Rio de Janeiro) 05 Juun 2021. Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu iscaliso kaddib markii xiddigaha xulka ay diideen inay ciyaaraan tartanka Copa America.
Tartanka Copa America ayaa loo soo wareejiyay dalka Brazil in lagu marti geliyo kaddib markii ay waddamada Argentina iyo Colombia ay siyaabo kala duwan u awoodi waayeen inay tartankan marti geliyaan, waxaana haatan lagu soo warramayaa inaysan xiddigaha xulka qaranka Brazil diyaar u ahayn ciyaarista tartanka qarammada qaaradda Koonfur Ameerika.
Muran badan ayaa weli ka taagan xulka Brazil, maadaama ciyaartoydu aysan wali ku faraxsanayn go’aanka Marti gelinta Copa America ee 2021-ka loogu soo rarayo dalkooda.
Waxaa la ogyahay in sababo la xiriira Korona Fayras looga soo wareejiyey marti-gelinta tartanka dalka Argentine, balse ciyaartoyda xulka Brazil ayaa fahamin go’aanka tartankan loogu soo sarayo marti-gelintiisa dalkooda, maadaama xaaladda KOFID 19 ay weli halkaas ka taagan tahay.
Inkastoo ay 2-0 ku garaaceen Ecuador, haddana diiradda waddanku waxa ay ku sii jirtaa haddii ciyaartoydu ay go’aansan doonaan inay ka haraan tartanka oo aysan ciyaarin iyo haddii tababare Tite uu iska casili doono booskiisa Tababarennimo hal toddobaad uun ka hor bilowga tartanka.
Go’aanka ay qaateen ciyaartoyda ayaa sii adkeeyey xaaladda Tababare Tite iyo xiriirka kubadda cagta Brazil oo martkii horeba aan wanaagsanayn, waxaana laga yaabaa in macallinku uu iscasilo.
Dad badan ayaa rumeysan inuu Tababarahan ka tagi doono shaqadiisa ka hor inta uusan bilaaban tartanka Copa America, laakiin wuxuu sheegay inuu qaadan doono go’aankiisa 8-da June kaddib marka ay kulankooda la ciyaaraan dhiggooda Paraguay.
RASMI: Ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
RASMI: Pep Guardiola oo ku guuleystay abaal-marinta Tababaraha sanadka ee horyaalka Premier League... (Waa kuwee Macallimiinta uu ku garaacay?)